ह्रदयश त्रिपाठीको बारेमा तुलानारायणको यस्तो टिप्पणी | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » ह्रदयश त्रिपाठीको बारेमा तुलानारायणको यस्तो टिप्पणी
ह्रदयश त्रिपाठीको बारेमा तुलानारायणको यस्तो टिप्पणी
ESAHARATIMES Friday, July 21, 20170No comments
नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल(राजपा) नेता हृदयेश त्रिपाठीजीले केही यता अन्तवार्ताहरु मार्फत निरन्तर आफनो धारणा सार्वजानिक गर्दै हुनुहुन्छ । यसबीचका तीनटा अन्तर्वाता सुन्दा/पढदा केही कुराहरु स्पष्ट हुन्छ ।
पहिलो, स्थानिय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछी राजपाको पार्टी लाइन र अध्यक्ष मण्डलप्रति उहाँ निकै आक्रोशीत हुनुहुन्छ । म यसलाई क्षणिक तर स्वभाविक मान्दछु ।
दोस्रो कुरा जुन उहाँले उठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो साँच्चिकै गंभीर प्रकृतिको छ । मधेसी राजनीतिमा पार्टी निर्माण कसरी हुने, खासगरी राजपाको सन्दर्भमा ? राजपाले आन्दोलन र निर्वाचनलाई कसरी हेर्ने ? दुईमध्ये कुनलाई कतिबेला के आधारमा प्राथमिकता दिने र कुनलाई छाडने ? अबको राजपाको नेतृत्व कसले, कुन आधारमा गर्ने ? पुराना पार्टीहरुका बरिष्ठ नेताहरुको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो विशुद्धरुपमा पार्टी निर्माणसँग जोडिएको प्रश्न हो ।
मधेसी राजनीतिमा पार्टी निर्माणको बहस धेरै पहिल्यैदेखी हुनुपथ्र्यो । ढिलै भएपनि शुरुभएको छ । यो राम्रो शुरुवात भएको छ । उहाँको यो प्रश्नसँग म पूर्ण सहमत छु ।
तेस्रो पक्ष, उहाँ आफनै पार्टीका केही नेताहरु (अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु) प्रति अनपेक्षितरुपमा बिष बमन गर्दै हुनुहुन्छ । सबै मानिसको आआफनै खाले बिगत हुन्छ । केही नेताको हकमा मौन बस्ने र केही नेताको बिगत कोटयाउने क्रममा जुनप्रकारको शब्दहरु चयन गर्दैहुनुहुन्छ, मलाई त्यो अशोभनिय लागेको छ । ब्यक्तिगत आक्षेपयुक्त टिप्पणीप्रति मेरो बिमती छ ।